Zimbabwe's evicted farmers win symbolic victory in South Africa
GMT 17:32 2015 Monday ,21 September
President Robert Mugabe's government
If anything is left over, German bank group KFW Bank Gruppe, which joined the legal action and is believed to be owed tens of millions of dollars by President Robert Mugabe's government, would take the lion's share, he said.
"This is a symbolic victory and we will pursue other commercial properties owned by Zimbabwe," said Spies, who represented the farmers through AfriForum, a mainly white civil rights group in South Africa.
Zimbabwe fought the judgement through to South Africa's Constitutional Court, which confirmed in a landmark judgement in 2013 that the farmers could sue in South African courts for compensation and attach Zimbabwe­government assets in the country.
"AfriForum regards its litigation against the Zimbabwe government as a civil sanction campaign against the ongoing and systemic abuse of human rights and the rule of law, and the destruction of land ownership in Zimbabwe," the group said in a statement.
Mugabe's land reforms, launched in 2000 and accompanied by violent evictions of thousands of white farmers, were aimed at redistributing farms to landless blacks.
But critics say they mostly benefitted the veteran leader's cronies, led to a devastating drop in agricultural production and crippled the economy.